Nampiaka-peo Rajoelina Efa izaho no lany sy mpandresy…
Marc Ravalomanana Hanao fanambarana anio
“Hitafa aminareo mpiray tanindrazana aho. Ny alakamisy 28 mey 2020 no fotoanantsika”, hoy ny hafatra nataon’i Marc Ravalomanana tao amin’ny pejiny manokana ao amin’ny tambajotran-tserasera.
Sata mifehy ny mpanohitra “Tokony hiezaka ny parlemanta roa tonta”
Ny sata mifehy ny mpanohitra sy ny hijoroana mpanohitra ara-pomba demokratika dia efa voalazan’ny lalam-panorenana. Efa nisy dingana goavana nametrahana azy io ny taona 2011, hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana, nanazava ny fahitany ny mampitarazoka ny raharaha ankehitriny.
Zavatra ambaran’ny mpitondra Misavoritaka ambony ambany
Ny mpanao gazety mampita sy mitatitra ny vaovaom-panjakana indray no mahazo tsiny, kanefa ny fitondram-panjakana no misavoritaka tanteraka ny zavatra ambany.
Antenimierandoholona Hodinihina ny tolo-dalàna momba ny toaka gasy
Ny alakamisy 28 may 2020 no handaniana ny volavolan-dalàna laharana faha 010/2019 tamin’ny 28 novambra 2019 mikasika ny fambolena ara-biolojika eto Madagasikara eny amin’ny Antenimierandoholona.
Distrikan'i Fandriana Asa maro no mbola handrasana amin'ny governemanta
Maromaro ihany ny lisitr'ireo zavatra mbola handrasana amin'ny asa tokony ho tanterahan'ny governamanta fahefana mpanatanteraka tarihan'ny Praiministra
Alban Rakotoarisoa "Bàbà" Aok’izay ny fiheboeboana na "werawera"
Maromaro ihany ireo fanontaniana napetraky ny mpanao gazety tompon'andraikitry ny fandaharana manokana ao amin'ny haino aman-jery tsy miankina iray tamin'Atoa Alban Rakotoarisoa
Filankevitry ny Minisitra Tompon’andraikitra ambony 44 notendrena
Nisy omaly 27 mey ny tatitry ny filankevitry ny minisitra nentina nanamafisana ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana,
Namaly bontana ny fanambarana samihafa manakiana mafy ny fifidianana nahalany azy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny sabotsy 7 martsa teo nandritra ny famoriam-bahoaka tao Betsinjaka Toliara.
Nahery fiteny sy manamaivana ny toe-draharaha mafampana, ary nanitrikitrika fa efa hatrany am-piandohan’ny fifidianana filoham-pirenena no efa fantatra ny fandreseny. Nambarany fa “Rehefa nisafidy ny vahoaka, nandeha ny fifidianana, dia nandeha ny fihodinana voalohany, izahay dia milaza hoe raha tsy nasiana fifidianana aza iny, fa raha ny fitiavan’ny vahoaka fotsiny no notsapaina dia efa fantatra hoe iza no mandresy ? Izao anefa ny zavatra mahagaga : nandeha ny fifidianana fihodinana voalohany, dia efa nilaza izahay fa mandresy. Nilaza ny sasany fa tsy mbola marina iny fifidianana iny. Nandeha ny fihodinana faharoa, nandeha ny fifidianana solombavambahoaka, dia mbola nandresy ihany, ary mbola resy ihany ry zalahy. Isaorana ny vahoaka aty Toliara satria nandresy ny MAPAR tamin’ny fifidianana depiote, hoy i Andry Rajoelina. Mbola milaza ihany ry zalahy hoe aleo asiana fihodinana fahatelo, ka nalefa ny fifidianana ben’ny tanàna. Nandresy tao Antananarivo, Nandresy tany Mahajanga, Toamasina, Toliara, Fianarantsoa,… kanefa izao indray milaza hoe andao hasiana “5ème tour”, ka aoka izay, leo ny vahoaka, liana amin’ny fampandrosoana ny Malagasy”, hoy i Andry Rajoelina.
Nandeha nivantana tamin’ny tambajotran-tserasera “facebook” moa ity kabary nataon’ny filoha ity, saingy mahagaga fa toa tsy hita intsony izany rehefa niverenana nokarohina omaly alahady. Nanenina tamin’ny vava be nataony ve ny filoha ? Ankoatra an’io, dia nitohy hatrany ny fampanantenana maro samihafa nataon’ny filoha toy ny hanamboarana Lapan’ny fanatanjahantena, fampianarana amin’ny sekolim-panjakana ho maimaimpoana,… kanefa ny eo aza mbola maro be ny tsy vita.